Nyochaa Doogee Valencia 2 Na 100 Pro | Gam akporosis
Achọrọ m ịtụle ọdụm a ogologo oge. Ekwuputara m oge ụfọdụ dịka naanị, na ọ bụ na ke akpatre anyị nwalere ma nyochaa Doogee Valencia 2 Y 100 Pro, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ọnụ ahịa nke ụlọ ọrụ ndị China na-akụ iji merie ọgụ siri ike nke gam akporo ala.
Na nke a Nyocha nke Doogee Valencia 2 na 100 Pro, ọnụ nke anyị nwere ike ịgụnye na ntinye ntinye gam akporo, ntinye ma ọ bụ njedebe dị ala gam akporo nke na-arịwanye elu n'etiti etiti etiti na nkọwapụta teknụzụ ma rụchaa na ọ bụ naanị afọ ole na ole gara aga ka a gụnyere na oke kachasị elu nke Android anyị laghachi show na ozugbo ihe niile a na-akpali akpali gam akporo ọnụ na-enye anyị ma ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ gị zụọ. Ọnụ nke obere karịa 100 Euro, kpọmkwem 106 Euro ekwụ ụgwọ ụgwọ gụnyere, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ya kwa ụbọchị ka m na-agwa gị na vidio dị na isi nke isiokwu a.
1 Nkọwapụta teknụzụ nke Doogee Valencia 2 Y 100 Pro
2 Ihe kacha mma nke Doogee Valencia 2 Y 100 Pro
3 Ihe kacha njọ nke Doogee Valencia 2 Y 100 Pro
Nkọwapụta teknụzụ nke Doogee Valencia 2 Y 100 Pro
Nlereanya Valencia 2 na 100 Pro
Ihuenyo 5 "IPS OGS nwere 2.5D teknụzụ HD mkpebi 1280 x 720 pikselụ 320 dpi na Corning ozodimgba iko nchedo
Nhazi Mediatek MT6735P Quad Core na teknụzụ 64 Bit 1 Ghz
Ebe nchekwa RAM 2 Gb
Nchekwa n'ime 16 GB n'ikpeazụ na-enweghị nkewa na nkwado Micro SD ruo 128 Gb
Igwefoto na-aga n'ihu 13 Mpx na FlashLED gụnyere
Njikọ SIM abụọ - 2G - 3G - 4G - Bluetooth 4.0 - Wifi - GPS - aGPS - Redio FM
Ihe ndị ọzọ Smart-edemede - Ogbugbu mmekọrịta
Akụkụ 142'6 x 72'1 x 9'35 mm
Ihe kacha mma nke Doogee Valencia 2 Y 100 Pro
Obi abụọ adịghị ya, nke kachasị mma nke a Doogee Valencia 2 Y 100 Pro, ma e wezụga ịchọta ya ozugbo na gị ọnụahịa mkpọsa, ọnụahịa dị ịtụnanya na nke a na-apụghị imeri emeri na nso ya, anyị nwere ike ịchọta ya na atụmatụ ya mara mma na ya elu mma ngosi na a nchapụta na larịị nke nchapụta, ọbụna n'èzí na-enwu gbaa nke na-enweghị ihe na-ekwo ekwo gam akporo ọnụ na ihe dị oké ọnụ karịa ya.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ uru na ntakịrị ntakịrị karịa 100 Euro anyị nwere ike ịnwe ọnụ ọnụ Quad Core, ya bụ, a quad cores na 2 GB nke Ram na eziokwu ahụ bụ na ọ dị ha ezigbo mma na nke a Doogee Valencia 2 na 100 Pro.
Ọzọ nke akụkụ siri ike nke ọhụụ Doogee ọhụrụ a na-akpọ ka ọ bụrụ eze na ala dị ala ma ọ bụ ọbụna gam akporo gam akporo, bụ eziokwu nke inwe ebe nchekwa dị n'ime na-enweghị nkewa, nke na-eduga anyị inwe karịa ohere zuru ezu iji wụnye ngwa niile anyị chọrọ, na ndị ọzọ na-atụle nkwado ya maka Micro SD ruo 128 Gb na ohere nke gam akporo 5.1 Lollipop na-enye anyị ka anyị nwee ike ibugharị data sitere na ngwa dị arọ dị ka egwuregwu laghachi na kaadị nchekwa dị na mpụga.
N'ikpeazụ, n'ihe banyere akụkụ ndị dị mma, anyị nwere ike itinye na igwefoto gị, ma n'ihu ma azụ na mgbe ọ bụla anyị nọ n'èzí ma ọ bụ na gburugburu ebe dị mma n'otu oge ahụ ụda pụrụ iche kedu ihe ọ na-enye anyị Onye na-ekwu okwu n'azụ a Doogee Valencia 2 Y 100 Pro.
Ihe kacha njọ nke Doogee Valencia 2 Y 100 Pro
Eziokwu bu na m nwere ihe di ole na ole na-adighi nma ikwu banyere Doogee Valencia 2 Y 100 Pro, ikekwe ihe batrị dị obere nke nwere naanị 2.200 mAh ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, na 5 ″ ihuenyo na mkpebi na-anọgide na HD, ọ bụ kpam kpam ike nke na obere mgbalị na-atachi obi a dum ụbọchị ike nke iji.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na ọ tinyela akụkụ ya dị mma na igwefoto ya n'ọnọdụ ọnọdụ ọkụ dị mma, m ga-etinyekwa ya na ngalaba nke kacha njọ nke Doogee Valencia 2 Y 100 Pro ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na-enwu gbaa n’ime ụlọ ma ọ bụ n’èzí n’abalị.
Doogee Valencia 2 na 100 Pro
IPS OGS HD ihuenyo
Quad isi processor
Batrị dị ntakịrị
Igwefoto na ọnọdụ ọkụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa nke Doogee Valencia 2 na 100 Pro. Ihe nzuzo nzuzo nke Doogee maka gam akporo ala
Eziokwu bụ na enwere m ya, m rutere otu izu gara aga ma ọ na-ezute ihe niile m tụrụ anya ya, dị ka ha na-ekwu, batrị ahụ ruo obere "obere" mana o zuru ezu inye m ụbọchị nke nnwere onwe, igwefoto ọ bụghị otú ahụ ihe ọma, ma obi abụọ adịghị ya na ha na-ahapụ a uto dị ukwuu n'ọnụ gị, na-enweghị obi abụọ m nwere ike ikwu otu, ekele!
Ọ bụ ezigbo oge gara aga iji nwee ike ịnụ ụtọ android 5.1 na ọnụ ya yana nnukwu mma HD ihuenyo, oke ogo dị elu na ọnụahịa a na-asọpụrụ. Naanị 106 euro.
Ekele enyi na ezigbo nhọrọ.
Whola, olee ebe ọ bụ maka 106 XNUMX?
Nye m aka biko: Ọ ga-abụ nzuzu mana ọ na-ewe m ihu. Mgbe m bidoro ekwentị mkpanaaka, ana m enweta ozi na-ekwu. »App ikike management na-emechi» na ihuenyo mmetụ kpamkpam na-ekpochi. Gịnị ka m metụrụla? Kedu ka m ga esi edozi nsogbu a ka m nwee ike iji ekwentị ọzọ? Daalụ n'ọdịnihu.
Ndewo Jose: Ntọala / General / Security / App ikikere. Activ rụọ ọrụ ya.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike, site na ihuenyo izizi ị metụrụ bọtịnụ aka ekpe / Nhazi usoro / Nche.
Ọ bụ ekwentị nwunye m, enweghị m ya n’ihu m. N’abali a, m na-achọ ịhụ ma ihe m gwara gị ọ̀ na-arụ ọrụ. Mee ka m Mara.
Daalụ maka ịza, mana ... ihuenyo ahụ anaghị aza ma amaghị m ihe ị pụtara site na aka ekpe. Damjọ na-ewe m na isi.
Anọ m na ekwentị mkpanaaka a ọnwa isii. Ana m etinye ekwentị ọtụtụ. Obi dị m ezigbo ụtọ na ya. Ọ nwere fluidity na arụ ọrụ ya. Aga m emegharia na akara a. Ana m akwado ya maka ọnụahịa ọnụahịa ya.
Ndewo, ezigbo ehihie, enwere m doogee Valencia Y100 ma achọrọ m ibugharị oku na onye ọzọ mana enweghị m ike ịchọta nhọrọ ebe m ga-esi mee ya.
Mmadu enwere ike igwa m otu m si eme
Ndewo, enwere m DOOGEE Valencia 2 Y100Pro na akara ngosi 4G apụtaghị, Movistar na-ekwu na m rụọ ọrụ ahụ mana ọ pụtaghị na ekwentị, Can nwere onye nwere ike ịgwa m ihe banyere ya?
Zaghachi Marcelino López
ndewo onye maara otu esi eweghachi ebe nchekwa nke ekwentị a
Zaghachi na cavaliere
Elena Montes Romero ebe ihe oyiyi dijo
Ndewo, enwere m ike itinye batrị nke gbakwunyere na pro? gbakwunyere nwere 3000 mah mana amaghị m ma ọ ga-adaba na pro ...
Zaghachi Elena Montes Romero
Alexis Martinez na-ewu ewu ngwa ọdịnala
OK Google nyere gị ohere izipu ozi na WhatsApp, Viber na ndị ọzọ